I-China Glass Folding Door Kinzon35 ifektri nabaphakeli | Kinzon
I-Glass Folding Door Kinzon35
I-Glass folding umnyango-Kinzon35 inephrofayli yesinxephezelo engalungisa igebe phakathi kohlelo nophahla. Lapho kusebenze isibambo sokukhiya esiseceleni esibekwe uhlelo lomnyango, i-Glass folding umnyango-Kinzon35 isebenza ngomshini oshukumisa wonke amaphaneli, uwacindezele. Isango eligoqeka ingilazi -Kinzon35 ingabeka amaphaneli engilazi angu-9 ngaseceleni elilodwa futhi isebenzise ingilazi engu-5 + 6A + 5 eshisa izikhawu kabili. I-Glass folding umnyango-Kinzon35 inezingxenye ezithile zokuklama zokugwema amaphaneli engilazi awela phansi lapho evula.
I-Glass folding umnyango-Kinzon35
Uhlaka lokugoqa ingilazi umnyango-Kinzon35 unephrofayli yesinxephezelo engalungisa igebe phakathi kohlelo nophahla. Lapho isebenzisa isibambo sokukhiya esiseceleni esibekwe uhlelo lomnyango, Uhlaka lokugoqa ingilazi umnyango-Kinzon35 lusebenza ngomshini odonsa wonke amaphaneli ndawonye, ​​uwucindezele. I-Kinzon35 ifreyimu yamadatha ethayela ingabeka amaphaneli wengilazi engu-9 ngakolunye uhlangothi futhi isebenzise ingilazi engu-5 + 6A + 5 engapheli. I-Kinzon35 ifreyimu yamathala omfula inezingxenye ezithile zokuklama zokugwema amaphaneli engilazi awela phansi lapho evula. I-Kinzon35 ifreyimu yamathanga angadonsa kahle noma iphaneli yengilazi ihamba ngomgodi wokuvula futhi abahamba bengagxili. Uhlaka lokugoqa ingilazi umnyango-Kinzon35 usebenzisa insimbi engagqwali ye-axle ekhethekile namasondo amakhulu athwele ibhola. Ngakho-ke ubukhulu obukhulu beKinzon35 bungama-850mm * 3000mm kufenisha yengilazi ngayinye.
I-Glass folding umnyango-Kinzon35 ivikela i-kuvulandi othulini nasemvuleni kanye nomoya nomsindo ngenkathi kuvumela ukusetshenziswa kwe-balcony unyaka wonke. I-Glass folding umnyango-Kinzon35 inendlela elula yokukhiya evumela ukuthi isebenzise ingilazi eyiseduze kakhulu eceleni njengoba iwindi lokungena umoya lingasetwa ezikhundleni ezihlukene ezintathu.Ukuvulwa kwesango lokungena kwe-Kinzon35 kuvulwe odongeni oluseceleni ngakunye. kukhulula imbobo yonke yokugcwala.
Ukugoqwa kwengilazi yomnyango we-Glass-Kinzon35 kungumphumela wokukhiqizwa komkhiqizo wesikhathi eside kanye nesipiliyoni sabasebenzisi sexesha elide. Ngenxa yamakhasimende angaphezu kwesigidi anelisekile avela emazweni angaphezu kwama-40, iKinzon35e ibe ngomunye weminyango ethandwa kakhulu ye-Glass emhlabeni wonke. Ikhwalithi engaguquki kanye nokuthuthukiswa komkhiqizo okuqhubekayo kukhokhile impela. I-Glass folding emnyango-Kinzon35 ibonakala ngokuqanjwa kahle, ukuqina nobungani bomsebenzisi.
Esedlule: Uhlelo lwe-Balcony Glazing System Kinzon06
Olandelayo: Uhlelo lwe-Balcony Glazing System Kinzon08
Isicabha Esilandela Kinzon35
I-Aluminium Door Kinzon35